दशैंमा घुम्नलायक ओखलढुंगाका ठाउँहरू | Hamro Okhaldhunga
दशैंमा घुम्नलायक ओखलढुंगाका ठाउँहरू
प्रकाशित मिति: ३१ असोज, २०७५
युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठले १९९२ सालमा कोरेको ‘ओखलढुंगा’ कवितामा ओखलढुंगा जिल्लाको प्राकृतिक तथा भौगोलिक अवस्थाको वर्णन पाइन्छ । कवितामा युगकवि श्रेष्ठले ओखलढुंगा जिल्लालाई सुन्दर र हरियाली जिल्लाका रूपमा चिनाएका छन् । हुनपनि ओखलढुंगा जिल्ला आफैंमा सुन्दर र हरियाली जिल्ला हो । यो जिल्ला पर्यटनका क्षेत्रमा पर्याप्त संभावना भएको जिल्लाको हो । पछिल्लो समयमा पर्यटकीय संभावना भएका यहाँका दर्जनौं ठाउँहरूलाई पर्यटकीय गन्तव्यका रूपमा विकास गर्न सुरू गरिएको छ ।
ओखलढुंगा जिल्लाले सोलुखुम्बुमा रहेको विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथा र पूर्वको पशुपतिनाथ भनेर चिनिने खोटाङको हलेसीधाम आउने पर्यटकहरूलाई लोभ्याउन सक्छ । काठमाडौंबाट सडकमार्ग हुँदै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा क्षेत्र जाने पर्यटन रूटको ट्रान्जिट प्वाइन्ट समेत ओखलढुंगा बनेको छ । जसले गर्दा ओखलढुंगा थप संभावनाको जिल्ला बनेको छ ।
यस जिल्लामा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक लोभ्याउने थुप्रै ठाउँहरू रहेका छन् । लिखु गाउँपालिकाको महादेव मन्दिर, मानेभञ्ज्याङ गाउँपालिकाको लिब्जु डाँडा, सिद्धथुम्का धाम, मोलुङ गाउँपालिकाको सेप्ली झरना, चिशंखुगढी गाउँपालिकाको रात्माटे झरना, कोटगढी, सिद्धिचरण नगरपालिकाको ठाडे, जन्तरखानीलगायतका क्षेत्रले पर्यटकको मन तान्न सक्छ ।
ओखलढुंगा जिल्लामा रहेका पर्यटकीय क्षेत्रमध्ये धेरै संभावना बोकेका प्रमुख पर्यटकीय क्षेत्रको यहाँ वर्णन गरिएको छ ।
लिखु गाउँपालिकामा रहेको पोकली झरना देशकै दोस्रो अग्लो झरना हो । यो झरना १३० मिटर अग्लो रहेको छ । सुन्दर पहाडको बीचबाट झर्ने झरनाले पर्यटकीय आकर्षण बोकेको छ । यो झरनामा जानका लागि रामेछापको मन्थली–ढाँडे–शीरिषेहुँदै ओखलढुंगा प्रवेश गर्न सकिन्छ । ओखलढुंगा सदरमुकामबाट भने कोषाहाट–घोराखोरी–रानीवन–यसम–गामनाङटार हुँदै सडकमार्गबाट जान सकिन्छ । वर्षाद्को समयमा भने सडक अबरूद्ध हुने भएकाले दुई दिन पैदल हिँडेर पुग्न सकिन्छ । जो–कोही पोकली पुग्नेले पोकलीको सुन्दरताको बयान नगरी फर्कंदैनन् । यहाँ बास बस्नका लागि राम्रो सविधा रहेको छ ।
पोकली झरनाको प्रचारप्रसारका लागि यसअघि लगातार तीन वर्षसम्म पर्यटकीय महोत्सव गरिएको थियो । प्रायः जाडो र गर्मी दुवै समयमा एउटै मौसम हुनु पोकलीको विशेषता हो । पोकलीमा आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटक दुवै आउने गर्छन् ।
तीन हजार तीन सय ५० मिटर अग्लो देम्बा डाँडा ओखलढुंगाकै अग्लो डाँडाको रूपमा चिनिन्छ । यो डाँडा खिजीदेम्बा गाउँपालिका वडा नं. ५ मा पर्दछ । यो डाँडाको विशेषता भनेकै विश्वको सर्वोच्च शिखर सगरमाथालगायतका दर्जनौं हिमशृङ्खलाको दृष्यावलोकन हो । यहाँ जाने जो कोहीले सोलुखुम्बु र ओखलडुंगाका आकर्षक पहाडी भूगोल हेर्दै मजा लुट्न पाउँछन् । यस क्षेत्रमा बहुमूल्य जडीबुटीहरू समेत पाइन्छ । यहाँ चैत–वैशाखको सिजनमा जंगलै ढकमक्क हुनेगरी रंगीविरंगी गुराँस फुलेको हेर्न पाइन्छ ।
यो डाँडामा पुग्न ओखलढुंगा सदरमुकामबाट चुप्लुभञ्ज्याङसम्म कच्ची बाटो हुँदै ५ घण्टासम्म लाग्छ । चुप्लुभञ्ज्याङबाट उत्तरतर्फ साढे ३ किलोमिटर उकालो लागेपछि यस डाँडाको विन्दुमा पुग्न सकिन्छ । यस्तै रामेछापतर्फबाट तामाकोशी–खिम्ति–मन्थली सडकखण्डको हल्देबाट धोवी–लिखुखोला–ढाँडे–खिजिफलाटे हुँदै चुप्लुभञ्ज्याङसम्म कच्ची बाटो प्रयोग गरी पुग्न सकिन्छ । चुप्लुभञ्ज्याङमा खाने, बस्ने व्यवस्थाका साथै विद्युत्को पनि सुविधा छ ।
ऐतिहासिक एवं साहित्यिक हिसाबले ओखलढुंगा सदरमुकामले विशेष महत्व बोकेको छ । महाभारत कालमा भीमले हालको सिद्धिचरण नगरपालिका १२ मा रहेको ओखल जस्तो गहिरो खोपिल्टो परेको ढुंगामा मुसलको सहायताले धान कुटी खाएकाले त्यसैको आधारमा पूरै जिल्लाको नाम ओखलढुंगा रहन गएको भन्ने भनाई पनि छ । त्यसैगरी मल्लकालीन समयमा काठमाण्डौका राजा लक्ष्मीनरसिंह मल्लले राज्य विस्तारको क्रममा काजी भीम मल्ललाई यस भेगमा पठाएका र उनको फौजले पूर्व विजय गर्दै यस ठाउँमा आई यहाँ राज्य चलाइरहेका किरातहरूलाई लखेटी लुटेको धान यहाँको ठूलो ओखल जस्तो ढुंगामा कुटी खाएकाले यस ठाउँको नाम ओखलढुंगा रहन गएको हो भन्ने जनश्रुति पाइन्छ । जे होस् जिल्लाकै पहिचान बोकेको उक्त ढुंगाको ओखल हालको ओखलढुंगा जिल्ला सदरमुकामस्थित सिद्धिचरण नगरपालिकाको वडा नम्बर १२ मा जोसुकैले सहजै अवलोकन गर्न सक्ने गरी सुरक्षित रूपमा राखिएको छ ।
ओखलढुंगा जिल्ला साहित्यिक पर्यटनका हिसाबले पनि अगाडि रहेको जिल्ला हो । युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको जन्मथलो यही जिल्लाको सदरमुकामस्थित सिद्धिचरण नगरपालिका वडा नं. १२ मा रहेको छ । उनको जन्मथलोलाई हाल व्यवस्थित बनाइएको छ । जहाँ युगकविको प्रतिमा र पार्क स्थापना गरिएको छ । युगकवि सिद्धिचरण श्रेष्ठको जन्मथलो र ओखलको ढुंगा हेर्न भनेर आन्तरिक तथा बाह्य पर्यटकहरू आइरहने गर्छन् । जिल्ला सदमुकाम क्षेत्रमै थामडाँडा, बीरेन्द्रपार्क, स्रष्टापार्क लगायतका ठाउँले रमणीय तथा पर्यटक लोभ्याउँदै आएका छन् । ओखलढुंगा बजारसँगै जोडिएको छ, बकुन्दे सामुदायिक वन । जसले गर्दा ओखलढुंगा सदरमुकामलाई सुन्दर र हरियाली देखाउँछ । नेपालका ठूला सहरहरू काठमाडौं तथा विराटनगरबाट सहज यातायात भएका कारण पनि सदरमुकाम क्षेत्रमा पर्यटकहरूको आवगमन भइरहन्छ ।
ओखलढुंगा सदरमुकामदेखि ११ किलोमिटर पूर्वमा अवस्थित रूम्जाटार धार्मिक, सांस्कृतिक एवं पर्यटकीय हिसाबले अगाडि रहेको छ । रूम्जाटारको नाम किराती राजा ‘रूम बुढा’को नामबाट ‘रूम्जाटार’ रहन गएको जनश्रुति पाइन्छ ।
रूम्जाटार नेपालका ठूला टारहरूमध्ये एक हो । नेपालको प्रचलित उखान ‘घुमिफिरि रूम्जाटार’ यही रूम्जाटारबाट उत्पति भएको मानिन्छ । गुरूङ समुदायको मुख्य बसोबास र अन्य मिश्रित समुदाय रहेको रूम्जाटार महिला उद्यमीहरूको हब पनि हो । यो ठाउ“मा साढे २ सय वर्ष अघिदेखि राडीपाखी उद्यम गरि“दै आएको छ ।
रूम्जाटार चिनाउनमा नेपालकी आधुनिक गीतकी प्रथम महिला गायिका मेलवादेवी र जोसमनी धर्मका प्रवर्तक सन्त योगी ज्ञानदिलदासको विशेष देन रहेको छ । धार्मिक हिसाबले वि.सं. १९०० को अन्ततिरबाट रूम्जाटारका गुरूङहरू दरबार निकट हुँदै गएपछि हिन्दु धर्मको प्रभाव बढ्दै गएको पाइन्छ । राजा वीरेन्द्रदेखि अन्य राजपरिवारका विभिन्न सदस्यहरूको धाईआमाको रूपमा रूम्जाटारका गुरूङ महिलाहरू थिए ।
चम्पादेवी मन्दिर हिन्दू धर्मालम्बीहरूको जिल्लाकै सबैभन्दा महत्वपूर्ण तीर्थस्थाल हो । यो मन्दिरकै नामबाट जिल्लाको एउटा स्थानीय तहको ‘चम्पादेवी’ नामाकरण गरिएको छ ।
मन्दिर साविकको विलन्दु र कटुञ्जे गाविसको संगमस्थलको रूपमा रहेको छ । यो मन्दिरमा जानका लागि ओखलढुंगा सदरमुकामबाट कटुञ्जेहुँदै पुग्न सकिन्छ । यो क्षेत्र सदरमुकामदेखि १२ कोष पश्चिम रहेको छ ।
रैथानै शेर्पा र गुरूङ जातिको परम्परागत संस्कृति र झाँक्री विद्या सिक्ने थलोको रूपमा यो ठाउँ परिचित छ । विशेष गरी यो तीर्थस्थलमा हिन्दु धर्मावलम्बीहरू जाने गरेका छन् । यहाँ गएर दर्शन गर्नाले मानोकांक्षा पुरा हुने विश्वास गरिन्छ । ककनीदेखि सूर्योदय र सूर्यास्तसँगै सर्वोच्च शिखर सगरमाथा, माउन्ट मकालु, लोत्से, आमादब्लम, गौरीशंकरलगायतका हिमश्रृंखला अवलोकन गर्न पाइन्छ । यहाँ विशेषगरी धान्य पूर्णिमाका दिन ठूलो मेला लाग्छ । मन्दिरमा दर्शन गर्न सिन्धुली, रामेछाप, खोटाङ, दोलखा, उदयपुर, दोलखा र राजधानी काठमाडांैसम्मका पर्यटक तथा भक्तजनको भीड लाग्ने गर्छ । चिताएको पुग्ने र जति तीर्थालु बढ्यो त्यही मात्रमा चम्पादेवी थान नजिकै रहेको झरनामा पानी बढ्ने धार्मिक विश्वास गरिने भएकाले भारतदेखि पनि वर्सेनि हिन्दु धर्मालम्बीहरू आउने गरेका छन् ।
साझेदारी उद्योग टिकाउनै गाह्रो
रूम्जाटारमा मिनिमार्ट सञ्चालन